Bit By Bit - Ethics - Hawlaha
[ ] Isagoo ka doodaya tijaabada Cudurka Kleinsman and Buckley (2015) wuxuu qoray:
"Xitaa haddii ay run tahay in khatarta imtixaanka Facebook uu ahaa mid hooseeya oo xitaa haddii, marka la eego, natiijooyinka waxaa lagu qiimeeyaa inay faa'iido leeyihiin, waxaa jira mabda 'muhim ah oo ku salaysan halkan in ay tahay in la xoojiyo. Si la mid ah xatooyu waa xatooyo iyada oo aan loo eegayn waxa qaddarinta ku lug leh, markaa dhamaanteen waxaan xaq u leenahay inaanan tijaabinaynin aqoon la'aan iyo oggolaansho, wax kasta oo ah nooca cilmi-baarista. "
Midkee ka mid ah laba qaab oo anshaxeed lagaga wada hadlay cutubkan-natiijadiisii ​​ama deontology -waa dooddan ugu dhow ee la xidhiidha?
Hadda, ka feker inaad rabto inaad ka doodo jagadan. Sidee ayaad ugu doodi laheyd wariyihii New York Times ?
Sidee, haddiiba, haddii dooddaada ay ka duwanaan lahayd haddii aad ka wada hadasheen saaxiibkaa?
[ ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) tixgeliyaan su'aasha ah in cilmi-baadhayaashu ay isticmaali karaan tweets in la tirtiray. Akhri warqaddooda si aad u barato asalka.
Ka baaraandeg go'aankaas ka fiirsashada aragti ahaan.
Falanqee go'aanka saxda ah ee ka soo baxa aragtida natiijada.
Maxaad ka heli kartaa kakooban kiiskan?
[ ] Maqaal ku saabsan anshaxa daraasaadka goobta, Humphreys (2015) soo jeediyay tijaabooyinka soo socda ee lagu sharxay qeexidda caqabadaha anshaxa ee waxqabadyada la sameeyay iyada oo aan la oggolaan dhammaan qaybaha saameysey oo waxyeellada qaar qaar caawiya dadka kale.
"U sheeg cilmi-baarayaasha waxaa la xiriiraya ururo bulsheed oo doonaya in ay ogaadaan in meelaynta nalalka waddooyinka ee xayawaanka ay yareeyn doonaan denbiyada rabshadaha ah. Daraasaddaani maadooyinka waa dambiilayaasha: waxay doonayaan ogolaansho la ogeysiiyey dambiilayaasha waxay u badan tahay in ay wax u dhimayaan cilmibaarista ayna u badan tahay inayan soo bixi doonin (ku xad gudbi ixtiraamka dadka); dambiilayaashu waxay u badan tahay inay kharashka cilmi-baaristu ku fashilmaan iyadoon wax faa'iido ah lahayn (ku xadgudubka caddaaladda); oo waxaa jiri doona khilaaf ku saabsan faa'iidooyinka cilmi-baarista-haddii ay waxtar leeyihiin, dembiilayaashu si gaar ah uma qiimeynayaan (soo saarka dhibaatada qiimeynta dareenka) ... Arrimaha gaarka ah ee halkan kuma koobna mawduucyada. Halkaan waxaa sidoo kale jira halis ah in la helo maaddooyinka aan munaasib ahayn, haddii tusaale ahaan dambiileyaasha ay ka aargoosanayaan ururada sameeynaya nalalka. Ururku waxaa laga yaabaa inuu si aad ah uga warqabo khatartaas, laakiin inuu diyaar u yahay inuu iyaga u qaado sababtoo ah waxay si khalad ah u rumaysanyihiin rajada aan ka jirin ee cilmi-baarayaasha ka soo jeeda jilidiyada hodanka ah kuwaas oo iyagu dhiirigelinaya qeyb ka mid ah daabacaadda. "
Ku qor email u dir hay'adda bulshada oo bixisa qiimaynta anshaxa ee tijaabada sida loogu talagalay? Miyaad ka caawinaysaa inay tijaabiyaan sida loo soo jeediyay? Arimahee ayaa saameyn ku yeelan kara go'aankaaga?
Ma jiraan isbeddello lagu hagaajin karo qiimeyntaada anshaxa ee naqshadaynta tijaabada ah.
[ ] Sannadkii 1970-yadii 60 nin ayaa ka qaybqaatay daraasad sahlan oo ka dhacday qolka ragga ee jaamacadda ee qaybta dhexe ee Maraykanka (cilmi-baarayaashu ma magacaabo jaamacadda) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Cilmi baadhayaashu waxay xiisaynayeen sida dadka looga jawaabo xadgudubyada meelahooda gaarka ah, oo Sommer (1969) lagu qeexay "aagga aan la arki karin ee ku hareereysan jirkiisa qof aan saldhig u noqon karin." Si khaas ah, cilmi-baarayaashu waxay doorteen inay bartaan sida Kaadida qofka ayaa saameyn ku yeeshay joogitaanka dadka kale ee ku dhow. Kadib sameynta daraasad aan caadi ahayn, cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen tijaabo goobeed. Ka qaybqaatayaasha waxaa lagu qasbay in ay isticmaalaan nuuca bidix-ugu badan ee ku jira musqulo saddexda kaadida ah (cilmi-baarayaashu ma sharaxayaan sida dhabta ah loo sameeyay). Ka dib, ka qaybgalayaasha ayaa loo qoondeeyey mid ka mid ah saddexda heer oo ah masaafada dadka. Ragga qaarkii, shakhsiyan ayaa isticmaalay xaqiiqda kaadida ee ku xigta; ragga qaarkiis, isku-xidhaha ayaa isticmaalay meel kaadida ah oo ka fog; iyo ragga qaarkiis, ma jiro qof xor ah oo soo galay musqusha. Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaaseen isbeddelkooda natiijada-waqti daahfuran iyo joogtaynta - iyada oo saldhig ku ah kaaliyaha cilmi-baarista gudaha fadhiga musqusha ee kudhow qaybta kaadida. Waa kuwan sida ay cilmi-baarayaashu sharaxeen habka cabbirka:
"Kormeere ayaa lagu taagay kursiga musqusha oo isla markiiba ku dhajiyay maaddooyinka maaddooyinka. Intii lagu jiray tijaabooyinkii tijaabada ahaa ee nidaamyadan waxay caddaatay in qalabka maqalka loo isticmaali kari waayay in la calaamadeeyo bilowga iyo joojinta [kaadida] ... Taa bedelkeeda, calaamadaha muuqaalka ayaa la isticmaalay. Kormeeruhu wuxuu u adeegsan jiray indho-indhayn ku salaysan buug yar oo ku yaalla buugaagta jiifka ah ee dabaqa hoose ee musqusha. Qalab 11-inch (28-cm) oo u dhexeeya dabaqa iyo darbiga dabaqada musqusha ayaa loo bixiyay aragti, iyada oo loo marayo khariidadda, dhakada hoose ee isticmaalaha iyo waxay suuro galisay suurta gal toos ah oo muuqaal ah oo ka timaadda ilmagaleenka. Kormeeraha, si kastaba ha ahaatee, wuxuu awoodi waayay inuu arko wejiga mawduuca. Kormeeruhu wuxuu billaabay laba saacadood oo jimicsi ah markii maadada ay kor u kacday kaadida, joojisay midkii markii la bilaabay kaadinta, oo uu joojiyay kan kale markii kaadida la joojiyay. "
Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in maskax ahaan hoos u dhacu uu keeno dib-u-dhac dheeraad ah oo bilawga ah iyo joogtaynta joogtada ah (jaantuska 6.7).
Miyaad u maleyneysaa in ka qaybgalayaashu waxyeeleeyeen tijaabadan?
Miyaad u maleyneysaa in cilmi-baadhayaashu ay tahay inay sameeyaan tijaabadan?
Maxaa isbeddel ah, haddii ay jirto, aad ku talin lahayd inaad hagaajiso isku dheelitirka anshaxa?
Jaantus 6.7: Natiijooyinka ka yimid Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Ragga musqusha galay ayaa loo qoondeeyey mid ka mid ah saddexda xaaladood: fogaanshaha (isku xirnaanshaha waxaa lagu dhejiyey urin degdeg ah), masaafo dhexdhexaad ah (shaandhaysan waxaa la dhajiyay hal urin oo laga saaray), ama xakameyn (ma jiro shaandheyn). Qofka indha-indheynaya ee fadhiga musqusha wuxuu isticmaalaa dhirbaaxo dhirta loo yaqaan 'customiscope' si loo ilaaliyo wakhtiga dib u dhaca iyo joogitaanka kaadida. Khaladaadka caadiga ah qiyaasaha qiyaasaha lama heli karo. Laga soo bilaabo Middlemist, Knowles, and Matter (1976) , sawirka 1.
[ , ] Bishii Agoosto 2006, qiyaastii 10 cisho kahor doorashadii hore, 20,000 oo qof oo ku noolaa Michigan waxay heleen boosteejo muujinaya dabeecadooda codbixinta iyo habdhaqanka codkooda deriskooda (Jaantus 6.8). (Sida ku xusan cutubkan, Mareykanka, dawlad-goboleedyada waxay haysaa diiwaanka codbixiyeyaasha ee doorashad kasta iyo macluumaadkani wuxuu heli karaa dadwaynaha.) Xilliyadii waraaqda ayaa kor u qaadaysa tirade codbixiyayaasha boqolkiiba hal dhibcood, laakiin kan kordhay kan kale boqolkiiba 8.1 dhibcood, saameyntii ugu weyneyd ee lagu arkay barta (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Saameyntu waxay ahayd mid aad u ballaadhan oo ah hawlwadeen siyaasadeed oo la yiraahdo Hal Malchow oo Donald Green Green u soo bandhigay $ 100,000 maaha in la daabaco natiijada tijaabada (malaha Malchow ayaa isticmaali kara macluumaadkaas) (Issenberg 2012, p 304) . Laakiin, Alan Gerber, Donald Green, iyo Christopher Larimer ayaa daabacay wargeyska 2008-dii Dib-u-eegista Sayniska Siyaasadeed ee Maraykanka .
Marka aad si taxadar leh u eegto boostada ku jirta shaxda 6.8 waxaad arki kartaa in magacyada cilmi-baarayaashu aanay muuqan. Taa beddelkeeda, cinwaanka dib u celinta waa in La-talinta Siyaasadeed ee Dhaqanka. Marka loo eego warqadda, qorayaashu waxay sharraxayaan: "Mahad gaar ah waxay u socotaa Mark Grebner oo ah La-talin Dhaqameed Dhaqameed, oo qorsheeyey oo maamulay barnaamijka boostada ee halkan lagu barto."
Qiimee isticmaalka daawadan marka la eego afarta mabda 'anshaxeed ee lagu qeexay cutubkan.
Qiimee daaweynta marka la eego fikrada ah sharafnimada macnaha.
Maxaa isbeddel ah, haddii ay jiraan, waxaad ku talin lahayd tijaabadan?
Miyay saameyn ku yeelaneysaa jawaabtaada su'aalaha sare haddii Mark Grebner horeyba u direy waraaqo isku mid ah waqtigaan? Guud ahaan, sidee bay cilmi-baadhayaashu uga fekeraan qiimaynta waxqabadyada jira ee ay sameeyeen dadka farsameysan?
Bal qiyaas in aad go'aansato inaad isku daydo inaad hesho ogolaansho wargalin ah oo laga helo dadka ku jira kooxda daaweynta, laakiin kuwa aan ka tirsaneyn kooxda. Saameyntani waxay saameyn kartaa go'aankani ku saabsan awooddaada aad ku fahmi karto sababaha isbeddelka heerarka cod bixinta u dhexeeya kooxaha daaweynta iyo kontoroolka?
Ku qor lifaaq anshax ah oo laga yaabo inay muuqato warqadan marka la daabaco.
Jaantus 6.8: Waraaqaha deriska ee Gerber, Green, and Larimer (2008) . Warqadani waxay kor u kacday boqolkiiba 8.1 dhibcood, saameyntii ugu weynayd ee weligeedba lagu arkay waraaqaha hal-warqad. Waxaa dib-u-bixiyay ogolaansho ka timid Gerber, Green, and Larimer (2008) , lifaaq A.
[ ] Tani waxay ku dhisantahay su'aashii hore. Marka 20,000 oo warqadahan la soo diro (Tirada 6.8), iyo sidoo kale 60,000 oo kale oo kuwa kale ah oo aan qarsoodi lahayn, waxaa jiray dib u dhac ku yimid kaqeybgalayaasha. Xaqiiqdii, Issenberg (2012) sheegay in "Grebner [agaasimaha La-talinta Siyaasadda Dhaqangalinta] marnaba awoodin in lagu xisaabiyo inta qof ee dhibaatada u geystay cabashada telefoonnada, sababtoo ah xafiiskiisa ayaa si degdeg ah u buuxiyay mashiinka cusub dadka wicitaanadu way awoodi waayeen inay ka tagaan farriin. "Xaqiiqdii, Grebner wuxuu sheegay in xitaa garsooruhu uu sii weynaan lahaa haddii ay kor u qaadeen daaweynta. Waxa uu ku yidhi Alan Gerber, oo ka mid ah cilmi-baadhayaasha, "Alan haddii aan ku qaadanay shan boqol oo kun oo doolar oo daboolay dowladdii oo dhan adiga iyo waxaan la noolaan lahaa Salman Rushdie." (Issenberg 2012, 200)
Macluumaadkani ma u beddeshaa jawaabahaaga su'aashii hore?
Xeeladahee kaaga shaqeyneysa go'aan qaadashada marka la eego hubin la'aanta ma kugula talin lahayd daraasado isku mid ah mustaqbalka?
[ , ] Ficil ahaan, doodda anshaxa badani waxay ka dhacdaa daraasadaha ay cilmi-baarayaashu aysan haysan oggolaasho dhab ah oo ka-qaybgalayaasha ah (tusaale ahaan, daraasaddaha saddexda ee lagu sharraxay cutubkan). Si kastaba ha ahaatee, doodda anshaxa waxay sidoo kale u kici kartaa daraasadaha ku habboon oggolaanshaha dhabta ah. Diyaarso daraasad khayaali ah oo aad ka heli karto ogolaansho dhab ah oo ka-qaybgalayaasha ah, laakiin aad weli u maleyneyso inay noqon doonto caddaalad darro. (Tilmaam: Haddii aad dhibtoonayso, waxaad isku dayi kartaa inaad akhrisid Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)
[ , ] Cilmi-baarayaashu waxay inta badan ku adkaadaan inay sharaxaan akhlaaqdooda anshaxa iyo midda guud. Ka dib markii la ogaaday in Tastes, Ties, iyo Time dib loo aqoonsaday, Jason Kauffman, hoggaamiyaha kooxda cilmi-baarista, ayaa ka hadlay faallo kooban oo ku saabsan anshaxa mashruuca. Akhri Zimmer (2010) kadibna dib u qoro faallooyinka Kauffman iyadoo la adeegsanayo mabaadii'da iyo habdhaqanka anshaxeed ee lagu sharraxay cutubkan.
[ ] Bangiyadu waa mid ka mid ah farshaxanno casriga ugu caansan ee Boqortooyada Midowday, waxaana loo yaqaanaa qoraallada dariiqa siyaasadeed ee jihada ah (sawirka 6.9). Aqoonsi cad, si kastaba ha ahaatee, waa qarsoodi. Bangiyadu waxay leedahay bog internet oo shakhsiyeed, sidaas darteed waxa uu aqoonsi karaa dadweynaha haddii uu rabo, laakiin isagu ma doortay. Sannadkii 2008, wargeyska Daily Mail ayaa daabacay maqaal lagu sheegayo inuu aqoonsaday magaca dhabta ah ee Banksy. Ka dib, sannadka 2016, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo iyo Steven C. Le Comber (2016) isku dayeen inay xaqiijiyaan codsigan iyadoo la adeegsanayo nidaamka habka Dirichlet ee habka juqraafiga. Si gaar ah, waxay soo uruuriyeen meelaha juqraafi ah ee Banksy ee qoraalka dadweynaha ee Bristol iyo London. Marka xigta, adoo raadinaya maqaallo wargeys ah iyo diiwaanka dadweynaha, waxay heleen cinwaanadii hore ee magaca qofka, xaaskiisa, iyo kubadiisa (sida kubada cagta). Qoraalku wuxuu soo koobayaa helitaanka warqaddooda sida soo socota:
"Ma jirto cid kale oo la tuhunsan yahay in ay baadhitaan ku sameeyaan, way adagtahay in la sameeyo waraaqo rasmi ah oo ku saabsan aqoonsiga Banksy ee ku salaysan falanqaynta lagu soo bandhigay halkan, marka laga reebo in uu yiraahdo dusha sare ee juquraafiyadaha ee Bristol iyo London waxaa ka mid ah cinwaanada loo yaqaan iyadoo [magac la caleemo saaray]. "
Kadib Metcalf and Crawford (2016) , kuwaas oo tixgelinaya kiiskan si faahfaahsan, waxaan go'aansaday inaanan ku darin magaca qofka markaad ka hadlaysid daraasaddan.
Qiimee daraasaddan adoo isticmaalaya mabaadi'da iyo qaabdhismeedeed anshaxeed ee cutubkan.
Miyaad samaysay daraasaddan?
Qorayaashu waxay caddeeyeen daraasaddan oo ku saabsan nuxurka warqaddooda iyadoo leh weedhahan soo socda: "Faahfaahin dheeraad ah, natiijooyinkani waxay taageereen talooyin hore oo falanqaynta ficilada yaryar ee la xidhiidha argagixisada (sida, qoraallada) ayaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo helitaanka saldhigyada argagixisada ka hor dhacdooyinka waxay dhacaan, waxayna bixiyaan tusaale xiiso leh oo ku saabsan sida loo isticmaalo moodeelka mashaakilka dhibaatada dhabta ah ee dunida. "Tani tani ma bedeshaa fikraddaada xaashida? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Qorayaashu waxay ka mid yihiin qoraalka asluubeed ee soo socda dhamaadka warqaddooda: "Qorayaashu waa ay ka warqabaan, oo ixtiraamaan, qarsoodiga ah [magaca dib loo soo celiyo] iyo eheladiisa oo kaliya sidaas darteed waxay u adeegsadeen xogta dadweynaha. Waxaan si ula kac ah u tirtiray cinwaanada saxda ah. "Tani tani ma bedeshaa fikraddaada xaashida? Haddii ay sidaas tahay, sidee? Miyaad u maleyneysaa in dadweynaha / shakhsiyaadka gaarka loo leeyahay ay si macquul ah uga dhigayaan kiiskan?
Jaantuska 6-aad: Sawirka Sawirka Spy Booth ee Banksy ee Cheltenham, England by Kathryn Yengel, 2014. Source: Kathryn Yengel / Flickr .
[ ] Metcalf (2016) ayaa ka dhigaysa doodda ah in "xogta dadweynaha ee la heli karo ay ku jiraan xog gaar ah ay ka mid yihiin kuwa ugu xiisaha badan cilmi-baarayaasha iyo ugu khatarta maadooyinka."
Maxay yihiin laba tusaalooyin oo qeexan oo taageeraya dalabkan?
Maqaalkani waxa uu sidoo kale sheeganayaa in ay tahay wax aan loo baahnayn in la yiraahdo "wixii waxyeello ah ee macluumaadka horeyba loo sameeyay ayaa lagu sameeyay dataset dadweyne." Sii hal tusaale ah oo ah meesha ay taasi noqon karto kiiska.
[ , ] Cutubkan dhexdiisa, waxaan soo jeediyay nidaam sir ah in dhammaan xogta ay yihiin kuwo la aqoonsan karo oo dhammaan xogta ay tahay mid xasaasi ah. Jadwalka 6.5 wuxuu bixiyaa liiska tusaalooyinka xogta aan haysan shakhsi ahaan shakhsi ahaan aqoonsashada macluumaadka laakiin taasi weli waxay ku xiran tahay dadka gaarka ah.
Xulo laba ka mid ah tusaalooyinkan oo sharax sida dib-u-aqoonsiga dib-u-aqoonsiga labada xaaladoodba uu leeyahay qaab isku mid ah.
Mid kasta oo ka mid ah labada tusaale ee qeyb ahaan (a), sharax sida xogta u muujin karto xog xasaasi ah oo ku saabsan dadka ku jira dataset.
Hadda ka qaado miisaanka saddexaad ee miisaska. Ku qor email u dir qof kale oo la tixgelinayo. U sharax sida ay xogtan u noqon karto mid la aqoonsan karo oo macquul ah.
Jadwalka 6.5: Tusaalooyinka Macluumaadka Bulshada ee aan haysanin cid kasta oo si cad u aqoonsanaysa Macluumaadka laakiin weli Weli Lagu Xidhiidhi Karaa Dadka Gaarka ah
Diiwaanka caymiska caafimaadka Sweeney (2002)
Macluumaadka macaamil ganacsi oo kaadhadh ah Montjoye et al. (2015)
Macluumaadka qiimeynta filimka Netflix Narayanan and Shmatikov (2008)
Wicitaanada teleefoonada wac Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
Diiwangalinta xogta Barbaro and Zeller (2006)
Macluumaadka demogaraamka, maamulka, iyo bulshada ee ardayda Zimmer (2010)
[ ] Ku ridista kabaha qof walba waxa ka mid ah ka qaybgalayaashaada iyo dadweynaha guud, ma aha oo kaliya asxaabtaada. Qeybtan waxaa lagu muujiyey xaalada Isbitaalka Cudurrada Xoolaha (Katz, Capron, and Glass 1972, chap. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .
Dr Chester M. Southam wuxuu ahaa dhakhtar iyo cilmi-baarayaal ka socda Machadka Sloan-Kettering ee Cilmi-baarista Kansarka iyo Professor Associate of Medicine at Cornell University Medical College. Bishii Luulyo 16, 1963, Southam iyo laba asxaabba waxay ku dhufteen unugyada kansarka ee ku jira meydadka 22 bukaan oo xanuunsan oo ku dhacay Isbitaalka Jaamicada Cudurrada ah ee New York. Cirbadahaasi waxay qayb ka ahaayeen baadhitaanka Southam si loo fahmo nidaamka difaaca ee bukaanka kansarka. Cilmi-baaris hore, Southam waxay ogaatay in mutadawiciin caafimaad qaba ay awoodaan in ay diidaan unugyada kansarka ee leysku duro illaa qiyaastii afar illaa lix todobaad, halka ay qaadeen bukaanno horey u lahaa kansar waqti dheer. Southam ayaa la yaabay haddii jawaab celinta dib u dhaca ee bukaanada kansarku ay ahayd sababtoo ah waxay qabeen kansar ama sababtoo ah waxay ahaayeen waayeel iyo marxaladihii hore. Si wax looga qabto fursadahaas, Southam waxay go'aansatay in ay unugyada kansarka nool ku darsamaan koox dad ah oo waayeel ah oo aan dhicin laakiin aan lahayn kansar. Marka ereyga daraasaddu ay faafto, ayaa qayb ahaan ka cagajiiday saddex dhakhtar oo laga codsaday inay ka qaybqaataan, qaar ka mid ah isbarbardhigga Nazi-ka-xoojinta xerada Nazi, laakiin kuwa kale oo ku saleysan xaqiijinta Southam-ka ayaa helay cilmi-baaris la'aan. Ugu dambeyntii, Guddiga Dib-u-habeynta Dastuurka ee New York ayaa dib u eegay kiiska si loo go'aamiyo haddii Southam ay sii wadi karto in ay sii wado daaweynta. Southam wuxuu ku dooday inuu difaacay "dhaqanka ugu wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa caafimaad ee mas'uulka ka ah." Difaaciisu wuxuu ku salaysnaa dhowr arrimood, kuwaas oo dhammaantood ay taageereen khabiiro kala duwan oo ka markhaati kacay: (1) ee sarreynta sayniska iyo bulshada; (2) ma jirin wax khatar ah oo la qaddarin karo kaqaybqaatayaasha; codsi ku saleysan qayb ka mid ah Southam ee 10 sano oo waayo-aragnimo hore ah oo leh in ka badan 600 maadi; (3) Heerka shaacinta waa in la waafajiyaa iyadoo la eegayo heerarka khatarta uu keeno cilmi-baadhaha; (4) cilmi-baarisku wuxuu u hoggaansamay qiyaasta caafimaadka ee wakhtigaas. Ugu dambeyntii, guddiga Regent ayaa helay Southam garsoore khiyaano, khiyaano, iyo dhaqanka aan xirfadlaha ahayn, lana hakiyey shatigiisa caafimaad muddo hal sano ah. Hase yeeshee, dhawr sano kadib, Southam waxaa loo doortay madaxweyne Maraykan ah ee Cilmi-baareyaasha Kansarka.
Daraasada Southam ee daraasaddan isticmaalaya afarta qodob ee cutubkan.
Waxay u muuqataa in Southam uu ka soo horjeeday asxaabtiisa oo si sax ah u saadaalinaya sida ay uga jawaabi lahaayeen shaqadiisa; dhab ahaantii, qaar badan oo ka mid ah ayaa ka markhaati furay isaga. Laakiin wuu awoodi waayay ama ma rabo inuu fahmo sida uu cilmi-baaristu u dhibto dadweynaha. Waa maxay doorka aad u maleyneyso in ra'yiga dadwaynaha - laga yaabo in uu ka duwan yahay ra'yiga kaqeybgaleyaasha ama dadka kale - waa in ay ku yeeshaan anshaxa cilmi baarista? Maxaa dhacaya haddii fikradda caanka ah iyo aragtida dadku ay kala duwan yihiin?
[ ] Qoraal lagu magacaabo "Crowdseeding in Congo: Isticmaalka telefoonada gacanta si loo ururiyo dhacdooyinka isku dhaca dhacdooyinka isku dhaca waqtiga dhabta ah", Van der Windt iyo Humphreys (2016) qeexayaan nidaam ururinta xog ururinta (eeg cutubka 5) oo ay abuurtay bariga Congo. Sifee sida ay cilmi-baarayaashu ula tacaaleen hubin la'aanta ku saabsan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ka-qaybgalayaasha.
[ ] Bishii Oktoobar 2014, saddex cilmi-baarayaal ayaa u diray dirawalada si ay u helaan 102,780 cod-bixiye oo ku yaal Montana-qiyaastii 15% codbixiyeyaasha diiwaan-gashan ee gobolka (Willis 2014) qayb ka ah tijaabada si loo qiyaaso haddii cod bixiyeyaasha la siiyey macluumaad dheeraad ah ay u badan tahay inay codeeyaan . Waraaqaha loo yaqaan '2014 Montana General Election Guide Guide' ee ku yaala Magaaladda Montana, ayaa waxa ay ka mid yihiin doorashadii madaxweynenimo, oo ay ka mid tahay barwaaqosooranka, oo ay ku jiraan Barack Obama iyo Mitt Romney oo isbarbardhigaya. Waraaqaha ayaa sidoo kale ku jiray dhalmo ka timid Seeraha Great of State of Montana (sawir 6.10).
Waraaqaha ayaa soo saaray cabashooyin ka yimid codbixiyayaasha Montana, waxayna keeneen Linda McCulloch, Xoghayaha Dawladda Montana, si ay dacwad rasmi ah ugu gudbiso dawladda gobolka Montana. Jaamacadaha ka shaqeeya cilmi-baarayaasha - Dartmouth iyo Stanford ayaa warqad u diray qof walba oo helay waraaqaha, raali gelinta wixii jahawareer gaaban iyo in uu caddeeyo in boostada "aysan ku xirnayn cid xisbi, musharax ama urur, oo aan loola jeedin in ay saameyn ku yeeshaan jinsiyad kasta. "Warqadda ayaa sidoo kale caddaynaysa in darajada" ay ku tiirsanayd macluumaadka dadweynaha ee ku saabsan cidda ku deeqday mid kasta oo ka mid ah ololayaasha "(Jaantus 6.11).
Bishii May ee sannadkii 2015, Guddoomiyaha Fulinta Siyaasadda ee Gobolka Montana, Jonathan Motl, ayaa go'aamiyay in cilmi-baarayaashu ay ku xad-gudbeen Sharciga Montana: "Guddoomiyaha ayaa go'aaminaya in ay jiraan xaqiiqooyin ku filan si loo muujiyo in Stanford, Dartmouth iyo / ama cilmi-baarayaashu ay ku xadgubeen ololaha Montana dhaqan galinta sharciyada u baahan diiwaangelinta, warbixinta iyo soo bandhigida kharashaadka madaxbannaan "(Helitaanka Helitaanka Number 3 ee Motl (2015) ). Guddoomiyaha ayaa sidoo kale kugula taliyay in Qareenka Degmada uu baaro in isticmaalka aan sharciga ah ee "Great Seal of Montana ay ku xadgudubtay sharciga gobolka Montana (Motl 2015) .
Stanford iyo Dartmouth ayaa isku khilaafsan go'aanka Motl. Afhayeen u hadlay Stanford Lisa Lapin ayaa yiri "Stanford ... ma aaminsani in sharciyada la jabiyay" iyo in boosteejintu aysan "ku jirin wax taageerid ah oo taageeraya ama ka soo horjeeda musharax kasta." Waxay tilmaameysaa in warqaduhu si cad u sheegay in " ma aqbalo musharrax kasta ama xisbi " (Richman 2015) .
Qiimee daraasaddan adigoo isticmaalaya afar mabda 'iyo laba qaab oo lagu qeexay cutubkan.
Iyadoo loo maleynayo in waraaqaha loo direy mudaaharaad rasmi ah ee codbixiyeyaasha (laakiin wax badan oo arrintan ka mid ah), shuruudaha laga yaabo inay diristaan ​​wax ka bedelaan natiijada Doorashadda Sare ee Cadaaladda?
Dhab ahaantii, waraaqaha loo diri maayo muunad khaas ah ee codbixiyayaasha. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Jeremy Johnson (oo ah cilmi-baarayaal siyaasadeed oo gacan ka gaystay baaritaanka), waxaa loo direy 64,265 codbixiye oo loo aqoonsaday in ay tahay mid si xor ah u ah mujtamaca dimoqraadiga ah ee xudduudaha dimoqoraadiyadeed iyo 39,515 qof oo loo aqoonsaday in ay yihiin muxaafid si ay u bartilmaameed u noqdaan bartamaha xuduudaha ee Jamhuuriga. Cilmi-baarayaashu waxay xaq u leeyihiin farqiga u dhexeeya tirada Demoqraadiyada iyo Jamhuuriyadda iyada oo ay sabab u tahay in ay filayaan in ay si aad ah uga hooseeyaan Demoqraadiyeyaasha Dimuqraadiga. "Tani ma waxay isbeddeshay qiimayntaada naqshadaynta cilmi-baarista? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Iyada oo ka jawaabeysa baaritaanka, cilmi-baarayaashu waxay sheegeen in ay doorteen doorashadan qayb ahaan sababtoo ah "looma baahna tartanka garsoorka in si dhow loola macaamilo asaasiga. Iyadoo lagu saleeyay falanqaynta natiijooyinka doorashadii hore ee doorashooyinka 2014-ka ee ku aaddan doorashadii hore ee garsoorka Montana, cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in daraasaddan cilmibaarista loo qorsheeyay aysan bedeli doonin natiijada tartanka " (Motl 2015) . Tani ma bedeshay qiimayntaada cilmi baarista? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Xaqiiqdii, doorashada ayaa u muuqatay mid aan si gaar ah u dhaweyn (miiska 6.6). Tani ma bedeshay qiimayntaada cilmi baarista? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Waxaa soo baxday in daraasaddan loo gudbiyey Dartmouth IRB mid ka mid ah cilmi-baadhayaasha, laakiin faahfaahinta ayaa si wayn uga duwanaa kuwa ka mid ah daraasadda saxda ah ee Montana. Boostada loo isticmaalo Montana weligeed laguma gudbin IRB. Daraasadaas weligeed laguma gudbin Stanford IRB. Tani ma bedeshay qiimayntaada cilmi baarista? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Waxa kale oo ay soo baxday in cilmi-baarayaashu ay walxo doorashooyin isku mid ah u direen 143,000 oo codbixiye oo ku yaal California iyo 66,000 oo New Hampshire ah. Ilaa hadda sida aan ogaado, ma jirin wax cabashooyin rasmi ah oo ay sameeyeen qiyaastii 200,000 oo waraaqo dheeraad ah. Tani ma bedeshay qiimayntaada cilmi baarista? Haddii ay sidaas tahay, sidee?
Maxay, haddii ay jiraan wax kale oo aad samayn lahayd si ka duwan haddii aad tahay baaraha maamulaha? Sidee baad u qorshaysan lahayd daraasaddan haddii aad xiiseyneysey inaad sahamiso haddii macluumaad dheeraad ah ay kordhinayso cod-bixiyeyaasha ku-meel-gaadhka ah ee isbaheysiga aan midna ahayn?
Jadwalka 6.6: Natiijooyinka laga soo doorto Doorashooyinka Maxkamada Sare ee Maxkamada 2014 (Waxaa laga soo xigtey: Xoghayaha Xoghayaha Gobolka Montana)
Codadka la helay
Maxkamadda Sare ee Cadaaladda # 1
Maxkamadda Sare ee Cadaaladda # 2
Jaantuska 6.10: Xawiluhu wuxuu u soo direy saddex siyaasi oo siyaasadeed oo ay ugu codeeyeen 102,780 codbixiyeyaasha diiwaangashan ee Montana iyada oo qayb ka ah tijaabinta si loo qiyaaso in cod bixiyeyaasha la siinayo macluumaad dheeraad ah ay u badan tahay inay codeeyaan. Tirada saamiga ee tijaabadan waxay ahayd qiyaas ahaan 15% codbixiyeyaasha xaqa u leh ee gobolka (Willis 2014) . Waxaa laga soo saaray Motl (2015) .
Jaantuska 6-aad: Warqadda raali-galinta ee loo diray 102,780 codbixiyeyaasha diiwaan-galiyay Montana oo helay waraaqaha lagu muujiyay sawirka 6.10. Warqada ayaa waxaa soo diray madaxweynayaasha Dartmouth iyo Stanford, jaamacadaha u shaqeeya cilmi-baarayaasha u soo diray boostada. Waxaa laga soo saaray Motl (2015) .
[ ] Maajo 8, 2016, laba cilmi-baarayaal ah-Emil Kirkegaard iyo Julius Bjerrekaer-xogta xayeysiinta shabakadda internetka ee internetka ee OKCupid oo si guud loogu sii daayay dataset qiyaastii 70,000 oo qof, oo ay ku jiraan doorsoomayaal sida magaca isticmaalka, da'da, jinsiga, meesha, aragtida diinta , fikradaha la xidhiidha astrolojiga, danaha shukaansiga, tirada sawirrada, iwm, iyo sidoo kale jawaabaha la siiyay 2,600 su'aalood oo ku saabsan goobta. Qoraalka qabyada ah ee la socda xogta la sii daayay, qorayaashu waxay qeexeen in "Qaar ka mid ah ay u jahawareeyaan anshaxa ururinta iyo sii deynta xogtan. Si kastaba ha noqotee, dhammaan xogta laga helay dataset ayaa ah ama ay horeyba u muuqdaan kuwo la heli karo, sidaas darted sii deyntani waxay kaliya ku soo bandhigeysaa qaabab wax ku ool ah. "
Ka jawaabista xogta, mid ka mid ah qorayaasha ayaa lagu weydiiyay on Twitter: "Dataset Tani waa aqoonsi si weyn loo aqoonsan karo. Xitaa waxaa ku jira isticmaalo magaciisa? Miyuu ahaa shaqo kasta oo loo qabtay si loo aqoonsado? "Jawaabtiisu waxay ahayd" Maya. Xogta horeba waa dadweynaha. " (Zimmer 2016; Resnick 2016) .
Qiimee warbixintan iyada oo la adeegsanayo mabaadiida iyo qaabdhaqanka anshaxa ee looga hadlay cutubkan.
Ma u isticmaali doontaa xogtaas cilmi baaris ahaaneed?
Maxaa dhacaya haddii aad naftaada ku xoqdo?
[ ] 2010-kii, falanqeeye sir doon ah oo ka tirsanaa Ciidamada Maraykanka ayaa 250,000 oo xarig ah oo wata diplomaasiyiin loogu talagalay hay'adda WikiLeaks, kadibna waxaa loo soo diray internetka. Gill and Spirling (2015) ku doodaya in "shaacinta WikiLeaks ay suurtagal tahay in ay metelayso xogta laga yaabo in lagu tijaabiyo si ay u tijaabiso aragtiyaha khiyaaliga ah ee xiriirka caalamiga ah" ka dibna tirtira saamiga dukumentiyada la daatay. Tusaale ahaan, qorayaashu waxay qiyaasayaan in ay wakiil ka yihiin 5% dhammaan cabirada diblooma inta lagu jiro xilligaas, laakiin in saamigaani uu ka duwan yahay safaaradda illaa safaarada (eeg Jaantuska 1 ee waraaqahooda).
Akhri waraaqda, ka dibna ku qor lifaaq anshax leh.
Qorayaashu ma aysan falanqeynin mawduuca mid ka mid ah dukumentiyada la daatay. Ma jiraa mashruuc kasta oo isticmaalaya fiilooyinkaas aad qaban lahayd? Ma jiraa mashiin kasta oo isticmaalaya fiilooyinkaas oo aanad qaban doonin?
[ ] Si loo baro sida shirkadu uga jawaabto cabashooyinka, cilmi-baaruhu wuxuu soo diray waraaqo cabasho been abuur ah ilaa 240 makhaayadaha ugu sareeya ee magaalada New York. Halkan waxaa ku qoran warqad khiyaali ah.
"Waxaan warqadan kuugu qorayaa sababtoo ah waxaan ka careysanahay khibrad cusub oo aan ku lahaa makhaayaddaada. Muddo badan ka hor, aniga iyo xaaskeyga waxaan u dabaaldegnay sannad-guuradeena koowaad. ... fiidkii wuxuu noqday mid bacdi marka calaamaduhu bilaabeen inay muuqdaan ilaa afar saacadood ka dib markay cunaan. Lalabo, matag, shuban, iyo calool xanuun caloosha oo dhan ayaa lagu tilmaamay hal shay: sumowga cuntada. Waxay iga dhigeysaa kuwo cadho leh oo u maleynaya in fiidnimadeena jacaylka gaarka ah ay hoos u dhigtay xaaskeyga iyadoo fiirineysa booska uurjiifka ah ee dabaqa lakabka ah ee musquskeena inta u dhexeysa wareegyada isdhaafka. ... Inkastoo aysan dooneynin inaan wax fayl ah u soo gudbiyo Xafiiska Better Ganacsiga ama Waaxda Caafimaadka, waxaan rabaa, [Magaca makhaayadda], si aan u fahmo waxa aan ku soo galey rajo ah inaad ka jawaabi laheyd. "
Qiimee daraasaddan iyada oo la adeegsanayo mabaadii'da iyo qaabdhaqanka anshaxa ee lagu sharraxay cutubkan. Marka la eego qiimeyntaada, miyaad daraasadda ku sameyneysaa?
Sidan ayaa ah sidan maqaayadaha warqadda heley (Kifner 2001) : "Waxay ahayd fowdo (Kifner 2001) ah mulkiilayaasha, maamulayaasha iyo hilibyada laga baadho kombiyuutarada loogu talagalay [magac la xarriiqay] ama rikoodhka kaararka deynta, dib u eegay cuntooyinka iyo soo saarista raashin suurtagal ah oo la cuno, waydiistay shaqaalaha jikada inay ku xiraan suurtogalnimada suurtagalnimada, oo ay wadaagaan jaamacadda iyo macallinka labadaba waxay ka dhigan tahay daraasad dugsi ganacsi ee jahannamada. "Macluumaadkani ma isbeddelayaa sida aad u qiimayso daraasadda?
Ilaa hadda sida aan ogaado, daraasadani dib uma eegin IRB ama cid saddexaad oo kale. Isbedelkaas miyuu isbeddelayaa sida aad daraasadda u qiimaysay Sababta ama sababta
[ ] Dhisida su'aashii hore, waxaan jeclaan lahaa inaad daraasaddan barbardhigto daraasad gebi ahaanba ka duwan oo ku lug leh makhaayadaha. Daraasaddan kale, Neumark iyo asxaabtiisaba (1996) u direen laba lab iyo laba gabdhood oo arday oo jaamacad ah oo dib loo soo celiyey si ay ugu codsadaan shaqooyin ahaan waardiyeyaasha iyo garsoorayaasha 65 makhaayadood oo ku yaal Philadelphia, si ay u baaraan takoorida jinsiga ee makhaayadda. 130 dalab ayaa keenay 54 wareysi iyo 39 shaqo oo bixiya. Daraasadu waxay muujisay caddayn muhiim ah oo ku saabsan takoorka jinsiga ee haweenka ku jira makhaayadaha qiimaha sare leh.
Ku qor lifaaq anshax ah daraasaddan.
Miyaad u maleyneysaa in daraasadani ay ka duwan tahay midka lagu sharraxay su'aashii hore. Haddii ay sidaas tahay, sidee?
[ , ] Waqtiga qiyaastii 2010, 6,548 macallimiin Maraykan ah ayaa helay emails la mid ah tan.
"Mudane Professor Salganik,
Waxaan kuu qorayaa sababtoo ah waxaan ahay Ph.D. ardayga oo daneyn weyn ku leh cilmi-baaristaada. Qorshahaygu waa inaan codsado Ph.D. Barnaamijyadani dayrta soo socota, waxaan rabaa in aan barto intii aan awoodi karo fursado cilmi baaris ah inta lagu jiro.
Waxaan joogi doonaa xerada maanta, iyo inkastoo aan ogahay inay tahay ogeysiis gaaban, waxaan la yaabay haddii aad haysatid 10 daqiiqo markaad rabto inaad la kulanto si aan uga hadlo shaqadaada iyo fursado kasta oo suurtagal ah ee aan kaga qayb qaato cilmi-baaristaada. Wakhti kasta oo kugu habboon adiga ayaa igu fiicnaan lahayd, maaddaama aad kula kulmeyso adiga mudnaanta koowaad ee booqashadan kaamka.
Waad ku mahadsantahay horay u qaadashadaada.
Si daacadnimo leh, Carlos Lopez "
Email-kaasi waa been abuur; waxay qayb ka ahaayeen tijaabin goobta ah si ay u qiyaasaan in macallimiintu ay u badan tahay inay ka jawaabaan emailka ku xiran (1) wakhtiga xaadirka ah (maanta iyo toddobaadka soo socda) iyo (2) magaca qofka diraayo, oo u dhexeeyay sinjiga iyo jinsiga (Carlos Lopez, Meredith Roberts, Raj Singh, iwm). Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen markii codsiyada ay ahayd in ay ku kulmaan hal usbuuc, ragga ragga ah waxaa loo siiyay in ay helaan xubnaha wax ka dhiga 25% oo ka badan intii ay ahaayeen dumarka iyo beelaha laga tirada badan yahay. Laakiin marka ardaydu ay codsadaan kulanno isla maalintaas, qaababkaasi waxay ahaayeen kuwo asal ahaan laga tirtiray (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .
Qiimee tijaabadan iyada oo la raacayo mabaadiida iyo qaabdhismeedka cutubkan.
Kadib markii daraasaddan ay dhammaatay, cilmi-baarayaashu waxay soo direen email-ka ku-salaysan ee soo-socda ee dhammaan ka-qaybgalayaasha.
"Dhawaan, waxaad heshay email ka timid ardayga oo weydiisanaya 10 daqiiqo waqtigaada si aad ugala hadasho Ph.D. barnaamijka (jirka ee emailka ayaa ka muuqda hoos). Waxaan maanta emailka kuugu soo direynaa si aan wax uga qabano ujeedada dhabta ah ee emailkaa, maadaama ay qayb ka ahayd daraasad cilmi baaris ah. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa in daraasaddeena aysan kugu dhicin wax khasaare ah, annaguna waan ka raali gelineynaa haddii aanad ku dhicin. Waxaan rajeyneynaa in warqadani ay bixin doonto sharaxaad ku filan oo ah ujeedada iyo naqshadeynta daraasadeena si loo yareeyo wixii walwal ah ee aad ka qabi karto ka qayb qaadashadaada. Waxaan rabnaa inaan kuugu mahadnaqno wakhtigaaga iyo akhrinta dheeraad ah haddii aad xiiseyneyso fahamka sababta aad u heshay farriintan. Waxaan rajeyneynaa inaad arki doonto qiimaha aqoonta aan rajeyneyno soo saarista daraasadan tacliineed ee ballaaran. "
Ka dib sharraxa ujeedada iyo naqshadeynta daraasadda, waxay sii wadeen:
"Sida ugu dhakhsaha badan natiijooyinka cilmi-baaristayaga la heli karo, waxaan ku soo diri doonaa boggayaga internetka. Fadlan naso hubso in xogta la aqoonsan karo weligeed laga soo sheegi doono daraasaddan, iyo nooca mawduuca murtiyeedku wuxuu xaqiijinayaa in aan awoodno inaanu aqoonsanno qaababka jawaab celinta emailka ee wadajirka ah-maaha heerka shakhsi ahaaneed. Ma jiro shakhsi ama jaamacad lagu aqoonsan karo mid ka mid ah cilmi-baarista ama xogta aan daabacno. Dabcan, wax jawaab ah oo khaas ah oo email ah ma aha mid macne leh sababtoo ah waxaa jira sababo badan sababaha xubinimada shakhsi ahaaneed uu aqbali karo ama u diidi karo codsiga kulanka. Dhamaan xogta horeyba waa la aqoonsaday oo jawaabaha email la aqoonsan karo ayaa mar horeba laga tirtiray diiwaanka our iyo server la xiriira. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro waqtiga xogta la aqoonsan karo, waxaa lagu ilaaliyay ereyada adag oo ammaan ah. Had iyo jeer had iyo jeer marka koorasyadu ay sameeyaan cilmi-baaris ku lug leh maadooyinka aadanaha, ayaa habka baaritaankeena waxaa ansixiyay Guddiga Dib-u-eegista Machadyada (Jaamacadda Columbia University Morningside IRB iyo Jaamacadda Pennsylvania IRB).
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan xuquuqdaada maaddo cilmi-baaris, waxaad la xiriiri kartaa Guddiga Dib-u-eegida Guddiga Dib-u-eegida ee Morningside [oo laga soo rogay] ama email ahaan [dib loo dhigay] iyo / ama Jaamacadda Pennsylvania Guddiga Dib-u-eegida Hay'adda [redacted].
Waad ku mahadsantihiin wakhti iyo waqti aad fahamsan tahay shaqada aan qabano. "
Maxay yihiin doodaha lagu xallinayo kiiskan? Maxay yihiin doodaha ka soo horjeeda? Miyaad u maleyneysaa in cilmi-baadhayaashu ay tahay inay ka doodaan ka qaybgalayaasha kiiskan?
Maaddooyinka taageerada internetka, cilmi baarayaashu waxay leeyihiin qaybta cinwaankeedu yahay "Mawduucyada Mawduuca Aadanaha." Akhri qeybtan. Ma jiraan wax aad ku dari karto ama ka saari lahayd?
Maxay ahayd kharashka tijaabadan cilmi-baarayaasha? Maxay ahayd kharashka tijaabada ah ee kaqeybgalayaashu? Andrew Gelman (2010) ayaa ku dooday in ka-qaybgalayaasha daraasaddan lagu abaal marin lahaa waqtigooda ka dib markii tijaabadu dhammaatay. Ma ogolaatay? Isku day inaad ka dhigto doodda adoo isticmaalaya mabaadii'da iyo habdhaqanka anshax ee cutubkan.